Otu ihe na-aghọ nkịtị n'etiti music n'anya kọmputa ọrụ bụ imetosi music n'ọbá akwụkwọ. Nhicha ma na-ahazi music n'ọbá akwụkwọ aka pụrụ ịghọ na-agwụ ike ma na-ewe usoro mgbe i nwere oke collection nke ọdịyo na video faịlụ. Ekele, e nwere ọtụtụ software ngwa dị gị nnapụta ọcha na hazie gị nnukwu music collection n'ụzọ dị mma. Isiokwu a kwuru banyere otú iji hazie egwu gị ọbá akwụkwọ iTunes, Windows na Mac.
Part m: Olee ọcha iTunes music Library - Wondershare TunesGo
Part II: Olee ọcha iTunes music ọbá akwụkwọ Windows
Part III: Olee ọcha iTunes music ọbá akwụkwọ Mac OS X
TunesGo site Wondershare bụ a software na-mepụtara iji belata ihe mgbu nke na-ahazi ma na-ehicha gị oke iTunes n'ọbá akwụkwọ. Ngwa bụ maka niile Apple ngwaọrụ. Ọdịnaya nke gị iOS ngwaọrụ nwere ike jisiri ke a ọzọ mgbanwe na oru oma ụzọ na iji ngwa a. The akụkụ kasị mma bụ na mmepe mgbe nile nweta nkwalite software n'ihi na mma ọrụ na elu atụmatụ.
The interface na Wondershare TunesGo nwere bụ Dịkwa n'Usoro, kensinammuo, streamlined na-enweghị a nkpoda mmụta usoro na-eme ka ọ dị mfe na-eji maka beginners. Ị nwere ike effortlessly jikọọ gị Apple ngwaọrụ na nyefee data site na otu ọzọ na-enweghị ịzọpụta data na Obodo siri ike mbanye nke gị PC.
Tụkwasị na nke a, Wondershare TunesGo-ahapụ gị ịhụchalụ media faịlụ n'ihu exporting ma ọ bụ importing na ya elu wuru na-music ọkpụkpọ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ihe iTunes ndabere, nke a bụ kwesịrị-nwere ngwa iji weghachi media si gị iOS ngwaọrụ nke mere na ị ghara ida mkpa data echekwara na ya.
Iji malite nhicha na orchestrating gị iTunes music Ọbá akwụkwọ, download Wondershare TunesGo na gị Mac PC. Mgbe echichi, na-eso nyere usoro gingerly:
Ẹkedori Wondershare TunesGo na PC gị na na pịa Gbanwee na iTunes Ikwunye-na akara ngosi site n'elu-nri akuku nke interface.
k Ka anya dị ka TunesGo na iTunes na-synched ọnụ, pịa Music nhọrọ n'okpuru Library Atiya site n'aka ekpe ebi ndụ nke interface.
Mgbe usoro egwu gị ọbá akwụkwọ na-egosipụta na nri ebi ndụ, pịa Jikwaa Music Library nhọrọ si Wondershare TunesGo panel na nri.
Site gbasaa nhọrọ, pịa CleanUpiTunes Library.
Site ọzọ ezi-na-n'iji ya gee ntị gbasaa nhọrọ na-egosi ọzọ na-egosi ga-ekwe omume nsogbu gị Ọbá akwụkwọ, họrọ onye na-anọchite anya nsogbu na ị chọrọ fix. (The oyiri songs nhọrọ họrọ a ngosipụta.)
Ozugbo ọzọ window abịa, họrọ track (s) na-achọ ezi-na-n'iji ya gee ntị.
Ezi-na-na-akụ na configurations ka kwa gị chọrọ.
Ịzọpụta mgbanwe site na ịpị Save button si n'elu-nri akuku nke window. Rịba ama: Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ multiple oyiri faịlụ, họrọ ihe niile na-achọghị faịlụ na pịa Doro Anya All button si n'elu-nri akuku nke window.
Ozugbo mere, ị nwere ike malite iji ọhụrụ enweta ume ọhụrụ na kpochara-elu n'ọbá akwụkwọ na-enweghị aga na nsogbu.
TuneUp Media bụ otu nke kasị mma nkwụnye ngwa mgbe ọ na-abịa n'ịhazi na nhicha gị music collection. The software dị maka ma Windows na iOS ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na Windows njirimara, ị nwere ike ibudata ngwa si ​​nyere njikọ: https://www.tuneupmedia.com/download/windows
TuneUp Media bụ ike na oru oma ngwá ọrụ ọcha efu ọ bụ mebiri emebi na mkpado ma wepụ oyiri tracks si gị music collection. Ka zuo ezu ya ụlọ nke nzukọ na ihicha ngwaọrụ, TuneUp media na-abịa na a smart atụmatụ akpọ 'Tuniverse' na-eme ka gị banyere obodo egwu ihe nke ọkacha mmasị gị artists. The elu 'DeDuper' mma-enye gị ka ihichapụ oyiri faịlụ na a jiffy.
Ọcha gị music n'ọbá akwụkwọ iji TuneUp Media:
Download na wụnye TuneUp Media na gị na desktọọpụ kọmputa ma ọ bụ na laptọọpụ PC. Rịba ama: Ozugbo ị na mezue nwụnye usoro, ngwa na-akpaghị aka integrates na gị Windows Media Player na kwa-ejikọ na online TuneUp nkesa. Mgbe ị malite TuneUp Media, na meghere interface nwere anọ nhọrọ dị ya bụ:
a. Clean (n'ihi na nhicha gị music collection)
b. Cover Art (n'ihi na ejuputa na efu cover nkà)
Ọcha gị ọbá akwụkwọ, na-emeghe Windows Media Player na nri-pịa chọrọ track (s) si egosipụta window.
Site na onodu menu na-egosipụta, họrọ Send Iji> Akụ Up nhọrọ.
Ka ị na-eme otú ahụ, họrọ track (s) / album (s) na-agafere ka TuneUp window ebe usoro ihe omume searches maka mkpado ọmụma si online nchekwa data.
Ozugbo TuneUp Media completes ya usoro, ị nwere ike pịa Save All ma ọ bụ Doro Anya All nhọrọ si n'elu-nri akuku nke window ịzọpụta mgbanwe ma ọ bụ wepu faịlụ (s) karị.
Ọ bụ ezie na Mac OS X nwere ole na ole software ngwa na ha nwere ike ime legwork nke nhicha gị music Ọbá akwụkwọ, nke ahụ apụtaghị na ị ga-dozie maka iTunes. Otu nke kasị mma software dị maka Mac OS bụ MusicBrainz Picard.
MusicBrainz Picard bụ a ọzọ ọgbọ cross-ikpo okwu (dị maka Mac OS, Windows, na Linux) music Ọhazi site MusicBrainz. The software e dere Python nke bụ onye dị elu mmemme asụsụ.
Ịnwere ike ibudata Piccard si nyere njikọ: https://picard.musicbrainz.org/downloads/
Ọhụrụ version nke Picard na-elekwasị anya album na-agba mbọ geo na cross-ikpo okwu ndakọrịta. Nke a na obibia-enye gị ohere ahu nagide MusicBrainz nchekwa data iji n'ọnu. Ọ dochie anya mbụ 'Omuma' tagger na-arụ ọrụ na na egwu na-agba mbọ obibia. Na Picard, ị nwere ike conveniently ọcha gị keukwu na unorganized music n'ọbá akwụkwọ na ala. Iji jiri MusicBrainz Picard maka nhicha gị music Akwụkwọ:
Download ngwa site na njikọ nyere n'elu na wụnye ya na gị PC. Rịba ama: Tupu etinyewe, i kwesịrị idetuo tracks si gị iTunes n'ọbá akwụkwọ ka a iche iche ọhụrụ nchekwa na kọmputa gị.
Ozugbo mere, na-emeghe MusicBrainz Picard.
Pịa Add nchekwa button site n'elu.
Site meghere Find Directory igbe, ịchọta ndị Desktọpụ nchekwa, na ịdọrọ ndị faịlụ site na ọhụrụ nchekwa na gị na desktọọpụ ekpe kọlụm na elu na ngalaba nke window.
Ka anya dị ka egwu na-depụtaghachiri, na Picard egosiputa ha n'okpuru Unmatched Files ndepụta na hapụrụ kọlụm nke elu ngalaba nke window, họrọ isi Unmatched Files nhọrọ, na pịa Lee elu button ọkọlọtọ toolbar ke n'elu.
Rịba ama: Ka ị na-eme otú ahụ, MusicBrainz Picard enyocha maka faịlụ 'ọmụma na MusicBrainz nchekwa data. Ozugbo ọmụma-achịkọta, faịlụ na-mgbe ahụ ota dị ka ha albums, na-egosipụta na nri n'igbe nke elu ngalaba nke window. Rịba ama: The egosipụta egwu amalite na a egwú dee akara ngosi. Mgbe tracks na-metụtara gị faịlụ, ha na-agbanwe ka otu n'ime ndị na-esonụ: • A obere red rektangulu egosi a ọjọọ egwuregwu si nchekwa data ebe a green rektangulu egosi a na-eju afọ egwuregwu. • A red rektangulu pụtara na Picard ka okosobode njehie. • A green ego akara na-egosi na track bụ na-ụbọchị na-azọpụta.
Ị nwere ike ele na tụnyere mkpado ọmụma site na ịme ọpịpị aha nke track, na-aga site Original Ozi na New Ozi na-egosi na ala ngalaba nke window.
Ozugbo ị nwere afọ ojuju na niile dezie metadata, nri-pịa Album akara ngosi (-egosi dị ka a kọmpat Disk ọzọ na aha nke album), na pịa Save nhọrọ si onodu menu.
Ka ihichapụ oyiri faịlụ, ị nwere ike pịa faịlụ (s) pụta ìhè na-acha uhie uhie na pịa Wepụ button ọkọlọtọ toolbar ke n'elu.
> Resource> iTunes> esi ọcha Up Music Library